२०७६ चैत १९ गते १८:०५
चैत्र १९, काठमाडौं । यतिबेला देश पुरै लकडाउन छ । हुनेखानेहरु घरमै परिवारसँग बसेर दिनैपिच्छे मिठा–मिठा परिकारहरु खाँदै दिन कटाउँदै छन् ।
हुँदा खाने तथा दैनिक ज्याला मजदुरीले छाक टार्नेहरु भोक र शोकमा छन्– ‘परिवार कसरी पाल्नु !’
हुँदा खाने हुन् या हुनेखानेहरु हुन्, सबैलाई आफ्नै पेटको चिन्ता छ । लकडाउनबाट आइलाग्ने आर्थिक संकट र भोकमरीको परिकल्पना गर्दै त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।
आफ्नै परिवारको चिन्तामा डुबेका छन् । यस्तो अवस्थामा मानव आश्रित ती जनावरको चिन्ता कसले गर्ने ? परिवारकै चिन्तामा डुबेपनि अधिकांशको मनमा कतै न कतै यो चिन्ता पक्कै छ कि– ‘ती जनावर के खाएर बाँच्लान् !’ तर कसले भर्ने तिनीहरुको पेट ?
कतिपयले भने आफ्ना वरिपरिका पशुपंक्षीहरुलाई आफूले सकेजति गाँस काटेर खुवाइरहेका छन् । नायिका वर्षा शिवाकोटी पनि यतिबेला आफ्नो घर छेउका कुकुरहरुलाई खाना खुवाइरहेकी छिन् ।
सामाजिक सञ्जालमा कुकुरलाई खाना बाँड्दै गरेकाे तस्विरहरु पोष्ट गर्दै उनले लेखेकि छिन्– ‘दिनदिनै नयाँनयाँ परिकारहरु घरमा बनाएर खाइरहेका छौँ तर यीनीहरुको बारेमा कसले सोच्ने ? जो हाम्रो खानामा निर्भर छन् ।’
यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि उनीभित्र कलाकारिता मात्रै होइन, पशुपंक्षीप्रतिको प्रेम पनि छ ।